Fifanarahana amin'ny fanodinana ny daty manokana
Rehefa tsindrio ny bokotra, dia alefanao aminay ny angon-drakitrao manokana, amin'izay dia manamafy ny fanekenao ny fanodinana azy ireo.
Mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny lalàna federaly laharana faha-152-FZ tamin'ny 27.06.2006 jona XNUMX "Momba ny angon-drakitra manokana", ny mpandraharaha dia voatery mandray ny fepetra rehetra eo amin'ny fandaminana sy ara-teknika ilaina hiantohana ny fiarovana ny angon-drakitra ataon'ny mpampiasa amin'ny hetsika tsy ara-dalàna na fidirana an-tsokosoko any amin'izy ireo, ary koa fihetsika mitaky fanimbana, fanovana, fanakanana, fandikana, fizarana data manokana. Ny hetsika hafa dia mendrika ho tsy ara-dalàna.
Loharano Internet (tranokala) dia sarotra amin'ny famaritana lahatsoratra, singa sary, singa famolavolana, sary, kaodin'ny programa, singa sary sy horonan-tsary, ary koa singa hafa ilaina amin'ny fiasa mahasoa. Ny adiresinay: cgreality.ru
Eo ambanin'ny fitantanan-tranonkala midika hoe olona mpiasan'ny AAAA ADVISER LLC izay manan-jo hitantana azy.
User - mpitsidika tranokala niditra tao amin'ilay tranokala, izay nanaiky ny fepetra momba ny fanekena voalaza, na inona na inona nandalovany ny fisoratana anarana, ny fombafomba fahazoan-dàlana na tsia.
ambany Fiarovana angona manokana dia midika andiam-pahefana mamela ny fanajana ny fepetra takiana amin'ny lalàna mifehy ny Federasiona Rosiana, amin'ny resaka fitehirizana, fanodinana, fitahirizana ary famindrana ny angona manokana an'ny mpitsidika.
Inona ny angon-drakitra an'ny mpitsidika rehefa mandeha mitsidika ilay tranokala:
Data momba ny pasipaoro mpitsidika (anarana feno);
Mailaka na adiresy IP an'ny mpitsidika;
Tel. No. mpitsidika.
Amin'ny fanekena ny fehezan-kevitry ny fifanarahana voamarika, ny mpitsidika dia manamafy ny fahazoan-dàlana handray andraikitra mifandraika amin'ny fanodinana ny angon-drakitra.
Ny fanodinana ireo angon-drakitra resahina dia midika ireto fihetsika manaraka ireto:
fanazavana (fanavaozana, fanovana)
fampiharana ny fampiasana
fandefasana (fizarana, fanomezana fidirana)
fampiharana ny depersonalization
fanimbana angona manokana.
Mba hanatanterahana ny adidy napetraky ny lalàna federaly etsy ambony sy ny lalàna mifehy ny lalàna mifehy izany dia mandray ny fepetra rehetra ilaina ny fitantanana ny tranokala. Ankoatr'izay, ny fitantanana ny tranokala, mifanaraka amin'ny lalàna federaly etsy ambony, dia manan-jo hamaritra tsy miankina ny firafitra sy ny lisitry ny fepetra ilaina ary ampy mba hahazoana antoka fa tanteraka ny adidy mifandraika amin'izany.
Ny fanekena voalaza dia manan-kery mandra-panafoanan'ny mpampiasa ny tranonkala azy. Ny fanafoanana dia atao amin'ny alàlan'ny fandefasana ny fangatahana voasoratra mifandraika amin'ny alàlan'ny mailaka voasoratra anarana na fandefasana amin'ny solontenan'ny orinasa tsy ara-dalàna.
Aorian'ny fahazoana fangatahana an-tsoratra hanafoanana io fanekena io amin'ny fikarakarana ny angon-drakitra manokana, ny Administration of the site cgreality.ru dia voatery hampitsahatra ny fanodinana azy ireo ary hanilika ireo angona manokana ao amin'ny tahiry.